Maxkamad hakisay musaafurinta dadka fiisaha ku galay Mareykanka - Worldnews.com
Xeer ilaaliyayaha maxkamadda ayaa amray in dadka lagu xirxiray eelaboorada inaan
"Maya nacayb, maya cabsi, qaxootiga halkan waalagu soo dhoweynayaan"
Maxkamad si ku meel gaar ah u joojisay musaafurinta dadka fiisaha ku gala US
Maxkamadda magaalada New York ayaa taageertay dood sharciyadeed ee ay gudbiyeen dadka ka soo horjeeda xannibaadda sida ku meelgaar ka ah uu Trump u saaray qaar ka mid ah...
Maxkamad ku taala Mareykanka oo joojisay musaafurinta dadka ku xanniban garoommada
Maxkamadda magaalada New York ayaa taageertay dood sharciyadeed �ay gudbiyeen dadka ka soo horjeeda xannibaadda sida ku meelgaar ka ah uu Trump u saaray dadka ka safraya...
Madaxweyne Trump ayaa difaacay go'aankiisa uu sida ku meelgaarka ah Mareykanka uga mamnuucay dadka ka safraya todobo dal oo Muslimiinta ku badan yihiin. Donald Trump wuxuu...
War ka soo baxay Aqalka Cad ayaa lagu sheegay in madaxweyne Trump uu saxiixay amar cusub oo lagu mamnuucay Muslimiinta lix dal. Xayiraaadda oo la mid ah middii hore waxay...
Gareowe Online 2017-03-06
Trump oo sixiixaya amar cusub oo socdaalka ah
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu saxiixo amar cusub oo ku saabsan socdaalka, sida uu sheegay kaaliyihiisa Kellyanne Conway. Amarka oo dib u eegis...
In ka badan hal milyan oo qof oo ku nool Britain ayaa saxiixday dalab ay uga codsanayaan dowladda inay baajiso booqashada la qorsheynayo inuu Trump ku tago Britain...
In ka badan hal milyan oo qof oo ku nool Britain ayaa saxiixday dalab ay uga codsanayaan dowladda inay baajiso booqashada la qorsheynayo inuu Trump ku tago Britain dabayaaqada sanadkan. Dalabkan ayaa jawaab u ah amar uu soo saaray madaxweyne Trump oo ka dhan ah qaxootiga. Kuwa ka dambeeya dalabkan ayaa ku dooday in boqorada ay ceeb ku tahay haddii Trump uu booqdo Britain. Sida...
Caalamka oo ka jawaabay go\_'aanka Trump ee Muslimka iyo qaxootiga
Go'aanka madaxweyne Donald Trump uu ku hakiyay dadka ka safraya todobo dal oo Muslimiinta u badan yihiin ayaa waxaa cambaareeyay ururada xuquuqda aadanaha u dooda ee daafaha caalamka ku nool. Sikastaba, qaar ka mid ah xisbiyada dhinaca midigta u janjeera ee Yurub ayaa soo dhoweeyay tallaabadaas uu qaaday Trump. Halkan waxaa ku qoray qaar ka mid ah falcelinta caalamka: Qaramada...
Ciidamada UN oo xadgudub galmo lagu eedeeyay
Waxaa la sheegayaa in Mareykanka uu diyaarinayo qaraar qabyo qoraal ah oo golaha amniga loo gudbinayo si loo musaafuriyo nabad ilaaliyayaasha wajahaya eedaha xadgudubka galmada. Sida lagu xusay warbixinta Qaramada midoobeey, sheegashooyiinka xadgudubka galmada ee ay...
Waaxda Qaramada Midoobey u qaabilsan difaaca xuquuqda aadanaha ayaa madaxweynaha Mareykanka ku eedeysay inuu hurinayo dembiyada naceybka. Madaxa laantaasi, Zeyd Racad Al-Xuseyni wuxuu sheegay in Trump uu sababay naceybka ka dhex taagan bulshooyiinka. Al-Xuseyni ayaa sidoo kale tilmaamay in eedaha "beenta ah" ee Trump uu u jeediyay soo galootiga ay sababeen dembiyo badan. Wuxuu...
Qaxootiga Soomaalida ee Kenya sidey u arkaan go\_'aanka Trump
Madaxweyne Trump ayaa difaacay go'aankiisa uu sida ku meelgaarka ah Mareykanka uga mamnuucay dadka ka safraya todobo dal oo Muslimiinta ku badan yihiin. Donald Trump wuxuu saxafiyiinta u sheegay in...